आकाशकी श्रीमती बन्दा पिज्मालाई कस्तो देखियो ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो – Kavrepati
Home / मनोरंजन / आकाशकी श्रीमती बन्दा पिज्मालाई कस्तो देखियो ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो
आकाशकी श्रीमती बन्दा पिज्मालाई कस्तो देखियो ? हेर्नुहोस पुरा भिडियो
admin August 17, 2021	मनोरंजन Leaveacomment 156 Views
काठमाडौ । टिकटक बाटै एका एक सेलिब्रेटी बनेका अर्का नाम हुन जुम्ल्याहा दिदी बहिनी प्रिन्सी र प्रिज्मा खतिवडा। उनीहरुको पनि टिक टकले नै भाग्य चम्काइदिएको छ। ‘ हाम्रो माया जिन्दावाद ‘ शिशिर भण्डारी र बिन्दु परियारको आवाजमा रहेको गीतबाट म्युजिक भिडियोमा प्रवेश गरेका ‘ भद्रगोल ‘ हुदै गायक प्रमोद खरेलको नयाँ गीत ‘ झुमा झुमा ‘ मा नायक पल शाह संग काम गर्ने अवसर पाएका छन्।
पछिल्लो गीत उनीहरुले आकास श्रेष्ठसंग सार्वजनिक हुँदैछ । आकासको जोडी प्रिज्मा बनेकी छन् । उनलाई साथ दिन प्रिन्सी पनि भिडियोमा देखिएकी छन् । प्रिन्सालाई वेहुली र आकासको जोडीको रुपमा देख्दा प्रिन्सीले जिस्क्याएकी छन् । प्रिन्जाले आकाससंग पहिलो पटकसंगै काम गरेको बताएकी छन् । प्रिन्साले काम गर्दा निकै रमाइलो लागेको बताएकी छन् । दिपक सिलवालको लिरिक्समा बनेको अस्मिता अधिकारीको स्वर रहेको गीतमा उनीहरुले अभिनय गरेका हुन् ।
आकासले प्रिज्मा र प्रिन्सीको टिकटक हेर्ने गरेको बताएका छन् । दुई दिन संगै काम गर्दा आकास निकै मेहनती र कामलाई इज्जत गर्ने खालको पाएको बताए । आकासलाई निकै जेन्टल र कम बोल्ने भनेर सबैले भनेको सुनेको र प्रिज्मा र प्रिन्सीले पनि त्यस्तै पाएको बताए । तिम्रै नाममा भन्ने बोलको गीतमा उनीहरुले अभिनय गर्न लागेको बताएका छन् ।
Previous ‘अन्डा शाकाहारी नै रहेको बिज्ञानको निष्कर्ष’
Next ७ बर्ष पछि पहिलो पटक श्रीमान श्रीमती भेट्दा डाको छोडेर रोए- श्रीमान श्रीमान श्रीमतीको चल्यो रुवाबासी , हेर्नुहोस